Baiboly prôtestanta amin' ny teny malagasy Info. About. Wh
ⓘ Baiboly prôtestanta amin' ny teny malagasy
Ny hoe helo dia fanagasiana ny teny anglisy hoe hell, izay nandikana ao amin io fiteny io ny teny hebreo hoe שְׁאוֹל / sheol sy ny teny grika hoe Γέεννα / gehenna avy amin ny teny hebreo hoe גֵי־הִנֹּם‎ / ge-Hinnom sy Τάρταρος / Tártaros. Tsy ny fiainan-tsi-hita manontolo anefa no tondroin ny Baiboly prôtestanta amin ny teny malagasy amin ny hoe helo fa "toerana inoan ny mpivavaka kristianina ho fitoeran ireo ratsy fanahy teto an-tany ka ijaliany amin ny tsy fahitany an Andriamanitra". Ny Baiboly katôlika amin ny teny malagasy kosa mampiasa ny hoe afobe.
Ny kristianisma eto Madagasikara dia iray amin ireo fivavahana arahin ny mponin i Madagasikara, indrindra ny Malagasy, ankoatry ny fivavahan-drazana sy ny finoana silamo sy ny hafa koa. Ny 41%n ny Malagasy dia Kristiana, araka ny tatitry ny US Departement of State tamin ny taona 2011. Hita ao ny sampan ny fivavahana kristiana toy ny Fiangonana nohavaozina sy ny Fiangonana loterana sy ny Fiangonana katôlika sy ny Fiangonana adventista sy ireo Fiangonana evanjelika tsy mitsaha-mihamaro. Miezaka ny hampitombo isa ny fiangonany ny Ortodoksa sy ny Anglikana sy ny hafa koa. Tamin ny taona 1963 h ...
I Jesoa na Jesosy na Jeso dia Jiosy tany Palestina izay inoan ny Kristiana ho zanak Andriamanitra nirahina ho ety ambonin ny tany hanavotra ny olombelona tamin ny alalan ny fahafatesany sy ny fitsanganany ho velona indray. Izy no foto-pisian ny Fivavahana kristiana. Araka ny Filazantsara dia efa nisy talohan izao rehetra izao i Jesoa. Izy no ilay Teny na Logos izay nahariana izao tontolo izao. Izy no ilay Teny tonga nofo. Notorontoronina tamin ny Fanahy Masina izy ka naterak i Maria virijiny. Zanak Andriamanitra izy. Nitsangana ho velona rehefa maty noho ny fanomboana azy tamin ny hazo fij ...
Ny teôlôjia dôgmatika na dôgmatika dia sampan ny teôlôjia kristiana izay andalinana ny votoatin ny fanekem-pinoana kristiana, dia ny amin ny finoana an Andriamanitra sy ireo asan Andriamanitra, indrindra ny teôlôjia ôfisialy ekenny Fiangonana. Ny teôlôjia dôgmatika dia azo faritana ho fanehoana amin ny "fomba siantifika" ny foto-pampianarana manontolo momba an Andriamanitra sy ny asan Andriamanitra miseho ety ivelany, araka ny tenim-pinoan ny Fiangonana. Ny teôlôjia dôgmatika dia manindry mafy ny maha zava-dehibe kokoa ny fahamarin ireo fehezankevitra voasoratra mitaha amin ny fahatsapana ...
Ny Trinite na Trinite Masina na Andriamanitra Telo Izay Iray na Andriamanitra Miray Telo dia ilazana an’ Andriamanitra izay Ray sy Zanaka ary Fanahy Masina araka ny finoan ny fiangonana kristiana sasany. Ho an ireo mino izany fampianarana izany, ny Trinite dia tsy midika hoe telo Andriamanitra. Amin izy ireo koa dia isan’ ny atao hoe zava-miafina na mistery ny Trinite satria saro-takarina ho an’ ny sain’ olombelona. Marihina fa tsy hita ao amin’ ny Baiboly ny teny hoe Trinite. Ny finoana ny Trinite dia itambaran’ ny ankamaroan’ ny fiangonana kristiana toy ny Katôlika Rômana sy ny Ortôdôksa ...
Ny Fanahy Masina, ho anny kristiana, dia ny herinAndriamanitra izay entiny miasa. Ao amin’ireo Fiangonana kristiana be mpanaraka sy mitazona ny tenim-pinoana mahazatra dia tsy hery fotsiny ihany ny Fanahy Masina fa persôna fahatelon’ Andriamanitra, manampy ny Ray sy ny Zanaka ao amin’ny Trinite. Ny taranja teôlôjika andinihana sy ampianarana ny amin’ny Fanahy Masina dia ny Pneomatôlôjia.
Ny Salamo fahenina na Salamo 6 dia salamo ao aminny Baiboly ao amin ny Bokinny Salamo. Tafiditra ao aminny fizaràna atao hoe "boky voalohany" ity salamo ity.
ity hoe Volambita, araka ny anaram - bolana malagasy avy amin ny teny sanskrity. Ao koa ireo manaraka ny tetiandro malagasy manara - bolana tanteraka ka
Ny fiainan - tsy hita na fitoeran ny maty dia toerana misy ny olona aorian ny fahafatesana. Ao amin ny Baiboly amin ny teny malagasy no ahitana ny teny
Tamin ny taona 1830 no vita dika amin ny teny malagasy ny Testamenta Vaovao. Tamin ny taona 1835 dia vita dika amin ny teny malagasy ny Baiboly iray
amin ny Rainy. Ny anarana hoe Jesoa dia hita ao amin ny Baiboly katôlika amin ny teny malagasy fa ny Jesosy kosa ao amin ny Baiboly prôtestanta amin
Adika amin ny teny malagasy amin ny hoe tenim - pinoana na teny finoana ny hoe dogma rehefa ampiasaina hilazana ny fanambaràna momba ny zavatra
Kristy Ny Prôtestanta malagasy no tena mampiasa ny teny hoe Krismasy na Kirisimasy. Ny fahaterahan i Jesoa Kristy izay ankalazaina amin ny Noely na
isan ny atao hoe zava - miafina na mistery ny Trinite satria saro - takarina ho an ny sain olombelona. Marihina fa tsy hita ao amin ny Baiboly ny teny hoe
prôtestanta amin ny teny malagasy Ny hoe Jesosy dia fanagasiana ny teny anglisy hoe Jesus, izay avy amin ny teny latina hoe Iesus, izay avy amin
Ny hoe persôna na Olona dia teny ampiasaina ao amin ny teôlôjia sy ny filôzôfia, hilazana fa Andriamanitra, araka ny finoan ny mônôteista sy ny teista
ranomasina, ny mpiandry ny andian ondriny? Aiza ilay nametraka teo amin izy ireo, ny Fanahiny Masina Ny Baiboly Masina Ny andian - teny izay nadika
fandikana ny teny hebreo hoe יהודי Yehudhi na י הו ד ים Yehudhim raha milaza maro Ny Baiboly prôtestanta amin ny teny malagasy dia mampiasa ny hoe Jiosy